မြန်မာနိုင်ငံ ၏ လူဦးရေ ၂၀ % အတွက် Covid-19 ကာကွယ်ဆေး ရရှိရန် ဗြိတိန်က ကူညီမည် - Pyit Time Htaung
Homepage / World News / မြန်မာနိုင်ငံ ၏ လူဦးရေ ၂၀ % အတွက် Covid-19 ကာကွယ်ဆေး ရရှိရန် ဗြိတိန်က ကူညီမည်
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ လူဦးရေ ၂၀ % အတွက် Covid-19 ကာကွယ်ဆေး ရရှိရန် ဗြိတိန်က ကူညီမည်
မြန်မာနိုင်ငံ ၏ လူဦးရေ ၂၀% အတွက် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ရရှိရန် ဗြိတိန်ကကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် ( ယနေ့ ) တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန် သည်။
ယူကေနိုင်ငံ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များ မှ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံမတည် ကူညီကာ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး လိုအပ်နေသည့် နိုင်ငံများကို ကာကွယ်ဆေး ရရှိရန် ကူညီမည်ဟု ဆို သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံရုံး က “မြန်မာနိုင် ငံအပါအဝင် အကူအညီ လိုအပ်နေသောနိုင်ငံများ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး ရရှိနိုင်ရေး အတွက် ယူကေနိုင်ငံက ၎င်း အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များထံ မှ ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကို မတည် ကူညီပေးလျက် ရှိပါတယ်။ ၎င်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ လူဦးရေ အနက် အကူအညီ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ် သည့် ၂၀% သော သူတို့အတွက် ကာကွယ်ဆေးများရရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးမှာဖြစ် ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူ အားလုံး ကာကွယ်ဆေး ရရှိရေး အတွက် ယူကေက ဆက်လက် ပံ့ပိုးကူညီသွားမှာဖြစ် ပါတယ်။
The UK helps raise $1 billion from global donors to help vulnerable countries, including Myanmar, access coronavirus vaccines. This will help provide vaccines for the most vulnerable 20% of the Myanmar population. The UK will continue to support Myanmar as it works to provide vaccines for everyone.” ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ လူဦးေရ ၂၀% အတြက္ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ရရွိရန္ ၿဗိတိန္ကကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ ( ယေန႕ ) တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။
ယူေကနိုင္ငံ အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာ အလႉရွင္မ်ား မွ ရန္ပုံေငြ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံမတည္ ကူညီကာ ျမန္မာနိုင္ငံ အပါအဝင္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆး လိုအပ္ေနသည့္ နိုင္ငံမ်ားကို ကာကြယ္ေဆး ရရွိရန္ ကူညီမည္ဟု ဆို သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ုံး က “ျမန္မာနိုင္ ငံအပါအဝင္ အကူအညီ လိုအပ္ေနေသာနိုင္ငံမ်ား ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆး ရရွိနိုင္ေရး အတြက္ ယူေကနိုင္ငံက ၎ အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ားထံ မွ ရန္ပုံေငြ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံကို မတည္ ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ၎ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံ ရွိ လူဦးေရ အနက္ အကူအညီ အလိုအပ္ဆုံးျဖစ္ သည့္ ၂၀% ေသာ သူတို႔အတြက္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားရရွိနိုင္ရန္ ကူညီေပးမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူ အားလုံး ကာကြယ္ေဆး ရရွိေရး အတြက္ ယူေကက ဆက္လက္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။
The UK helps raise $1 billion from global donors to help vulnerable countries, including Myanmar, access coronavirus vaccines. This will help provide vaccines for the most vulnerable 20% of the Myanmar population. The UK will continue to support Myanmar as it works to provide vaccines for everyone.” ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
Posted in World NewsTagged ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး, ဗြိတိန်, မြန်မာနိုင်ငံ
Previous post တရုတ်နိုင်ငံ ထုတ် SINOPHARM ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ကို ကမာ ္ဘ့အန္တရာယ် မကင်းဆုံး ကာကွယ်ဆေး အဖြစ် ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက် ကာကွယ်ဆေးကျွမ်းကျင်သူများဆို
Next post အမျိုးသမီး တစ်ထောင်ကျော် ကို လိင်စော်ကား ခဲ့တဲ့ တူရကီ မွတ်ဆလင် တရားဟောဆရာ ထောင်ဒဏ် (၁၀၇၅) နှစ်ကျ